Ka ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ n'ụlọ, ọnụ ọgụgụ nke nzukọ nzukọ na-arị elu. Ọ na-eju m anya na ọnụ ọgụgụ nzukọ ebe onye na - eweta ihe nwere nsogbu na - ekenye ihe ngosi PowerPoint na ihuenyo. Anaghịkwa m ewepụ onwe m na nke a… M goofed a ugboro ole na ole n'ụzọ na-egbu oge mmalite nke a webinar n'ihi mbipụta m agbara ndi.
Otu zuru ntọala, ezie, na m hụ na e debere na-azọpụta ọ bụla online ngosi m na-eme bụ ikike ẹkedori Power Point ngosi na windo kama ndabara nke Onye kwuru okwu kwuru nke nwere ike ibibi nsogbu… ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nwere ọtụtụ ihe meziri. Ọ nwere ike zoo gị n'ezie ogbako software igodo na-emeghe windo dị iche iche hụ na i meziri… na-agbagwoju anya gburugburu.
PowerPoint nwere kediegwu… ma ike ịchọta… mwube ebe i nwere ike gị Slide Show na-emeghe na windo nke ọ bụla kama. Ntọala a na - enyere gị aka imeghe ngosi na ọnọdụ Slide Show, mana n'otu windo dị mfe ịkekọrịta n'ime Mbugharị ma ọ bụ webinar ịntanetị ọ bụla ma ọ bụ sọftụwia nzute ma na - ejikwa bọtịnụ gị, akara ngosi, ma ọ bụ akụ gị jikwaa ngosi gị.
Mgbe ịpịrị Set Up Slide Show, a ga-enye gị nhọrọ iji melite ya Mia ngosi na windo nke ọ bụla. Lelee a nhọrọ, pịa OK… na Chekwaa Okwu Gị. Nke ikpeazu nwere ike bụrụ ihe kachasị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-ebu ụzọ ma mepee ihe ngosi gị mgbe webinar malitere. Ọ bụrụ na ịcheghị ya na mwube na-enyere aka, Ngosipụta ga-eweghachi azụ na ọnọdụ Ọkà Okwu.
Ihe ngosi a na ihe atụ m bụ otu usoro mmụta dijitalụ m mepụtara na Mahadum Butler nke a na-eji mba ụwa azụ ugbu a iji zụọ ndị otu na Roche. Anyị mere usoro ihe omumu ahụ na ntanetị site na iji Mbugharị ma tinye ọnụ ụlọ ụlọ mbugharị, Jamboards maka ihe omume na inye aka. N'ihi nke a, achọrọ m inch ọ bụla nke ntanetị m atọ iji nwee ike ịlele ụlọ, nnọkọ Jamboard, vidiyo nke ndị bịara, nkata nkata, yana ngosi. A sị na m mepere PowerPoint na ọnọdụ Ọkà okwu, agara m efunahụ windo 2 naanị na Slide Show… ma eleghị anya zoo ọtụtụ windo ndị dị mkpa n'azụ ha.
Y’oburu na imeputa ihe nlere gosiputara n’ime ulo oru gi, a gha m akwado ya ka i dobe ihe ndebiri ugboro abuo a… maka okwu okwu na nke ozo maka onodu Virtual. N'ụzọ ahụ, ka ndị otu gị na-akwadobe ụzọ ngosi ya nke ọma, ọ dịghị ha mkpa ịga chọọ ọnọdụ a. Ọ ga-arụ ọrụ na akpaghị aka mgbe ha mepụtara ma chekwaa ngosi. Mgbe mmalite ihe nkiri ahụ, ọ ga-emepe emepe n’ime windo ndị ahụ!